Tim Cook anoratidza mimhanzi yake yekutamba kuti asimudze kumirira pakutanga kwechiitiko | Ndinobva mac
Tim Cook anoratidza mimhanzi yake yekutamba kuti asimbise kumirira pakutanga kwechiitiko
Haasi mupfupi kana simbe uye seye akanaka CEO weApple zvaari, Tim Cook anoshambadzira masevhisi ekambani chero nguva. Nhasi inguva yakanaka kusimudzira Apple Music uye akazviita kuburikidza neTwitter. Asi inoshandiswawo kurumbidza mubatsiri ane mukurumbira. Siri anotamba mubatsiri akanaka uye anozadzisa zvishuwo zvebhosi wake. "Siri isa playlist yezuva rechinoitika."
Tim Cook ari kushandisa zuva iri zvakanaka kwazvo. Kufunga izvo chiitiko chacho chakatonyorwa kare, iwe unogona kuzorora uye uone kuti zvinoshanduka sei kuburikidza nesocial media uye woona kuti hapana chinokanganisika online. Nechikonzero ichocho uye asati atanga, kurerutsa kumirira kusvika nguva inotanga chiitiko, akafunga kuisa mimhanzi uye kugadzira mamiriro.
Kana iwe uchida kunzwa nziyo dzakafanana naTim Cook maawa mashoma nguva isati yatanga yechiitiko chehurukuro ye iPhone 12 uye ImbaPod mini tevera misoro iyi.
Hei Siri, tamba yangu yechiitiko zuva rekutamba! Tokuonai mese munguva pfupi! #AppleEvent https://t.co/CDTYPczjCz
- Tim Cook (@iku_cook) October 13, 2020
Tariro Dzakakwirira Nekutya! KuDisco
Chero Chazvinotora naFungidzira Dragons
Uya Sezvauri neTenile Townes
Nhatu Shiri Diki naBob Marley & ivo Vanomirira
Nguva Yakanaka Roll naJimmie Allen & Nelly
Sir Duke naStevie Wonder
Ndiri Kuona Zvakajeka Zvino naJohnny Nash
Kurota naFleetwood Mac
Iwe Unofanira Kuve naDesree
Kubwinya naTiwa Savage
Shot yangu neakanda «Hamilton»
Hakuna Matambiro Ega (Acoustic Version)
Yakavhunika MuBlue neBob Dylan
Svetuka naVan Halen
Ndiendese kuChechi naHozier
Musikana Pamoto naAlicia Keys
Wese Munhu Anoda Chiedza chezuva naRoy Ayers Ubiquity
Simuka naAndra Zuva
Anoshamisa naBurna Boy
Inzwa Senge Kusvetuka naMarcia Griffiths
Kurumidza sezvaunogona naFiona Apple
Ini ndairarama neOneRepublic
Dombo rakadzikama naAretha Franklin
Zvakafanana (kubva kuMotion Mufananidzo «Pamatombo»)
Zvakaitika naVictoria Monet, Khalid & SG Lewis
Kutamba muMwenje weMwedzi (uine NEIMY) naJubel
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Music » Tim Cook anoratidza mimhanzi yake yekutamba kuti asimbise kumirira pakutanga kwechiitiko
Chii chatinogona kutarisira kubva kuchiitiko icho chichaitika mumaawa mashoma
New Mac mamodheru akaburitswa kuti atange mune imwe nyaya yemavhiki